Wasiir Xirsi Oo Shir Gaara Turkiga Kula Galay Mudane Faarax Biindhe Iyo Eedaymihii Faysal Cali Waraabe Oo Rumoobay. | Salaan Media
Weftigii ka socday dawlada Somaliland ee uu hogaaminayay Wasiirka Madaxtooyada Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa sida ila wareedyo u dhuun daloola waftigan iyo hawlahooda tibaaxayaan in Wasiir Xirsi shir gaar ah oo albaabadu u xidhan yihiin hadda kula jiro nin lagu magacaabo Faarax Biindhe oo gudoomiye u ah Beesha Hawiye ee ku dhaqan Somaliland. Ninkan iyo dawrka uu ku leeyahay wada-hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ayuu hore uga hadlay Gudoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe.
Haddaba ila wareedyadan ka imanaya dalka Turkiga oo waftiga ka socda dawlada Somaliland oo isugu jira xukuumada iyo Golayaasha Qaranka ay kula kulmayeen wefti ka socda Soomaaliya si loo sii wado wadahadaladii labada dhinac ee muddoba soo socday ayaa iftiiminaya in Mudane Xirsi isla markiiba shir gooni ah la galay Mudane Faarax Biindhe. Faarax Biindhe ayaa todobaadkii hore ka baxay Hargaysa haddana la socday weftiga Soomaaliya ee Turkiga ku sugan. Arrintan ayaa marag iyo cadayn buuxda u ah eedaymihii uu Eng. Faysal Cali Waraabe u soo jeediyay xukuumada Somaliland iyo habka ay uga shaqaynayso ama u hagayso wada-hadaladan u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland oo mugdi badani ku jiro jihada loo wado.
Waxa kale oo iyana mudan in la sheego in la jebiyay nidaamkii lagu hagayay wada-hadalada labada dal u dhexeeya oo hore loo diiday in metelayaasha dhanka Soomaaliya ay ku jiraan dad dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Somaliland. Waxaa haddaba xusid mudan in weftiga ka socda dawlada Federaalka Soomaaliya uu ku jiro nin ah Wasiiru-dawlaha Amniga dawlada Federaalka Soomaaliya oo dhalasho ahaan ka soo jeeda degaanada Somaliland. Arrinkan ayaa muujinaya sida loo jebiyay xeerarkii iyo heshiisyadii lagu hagayay wada-hadaladan u dhexeeya labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland isla markaasna sii kordhinaya mugdiga iyo rajo la’aanta ka soo fool ah leh wada-hadaladan.
Waxaa muhiim ah in shacabka reer Somaliland fiiro gaar ah u yeeshan wada-hadalada Soomaaliya iyo Somaliland oo sida xukuumada Somaliland ee Mudane Xirsi bud tuurka u yahay u wado halis iyo khatar aan laga soo waaqsan karin ku keeni karta jiritaanka Somaliland. Waxaa kale oo muhiim ah in shacabka reer Somaliland dhug u yeeshaan in haddii markan wax qaloocdaan oo Somaliland qadiyadeeda si hufan u soo bandhigi waydo uguna dagaalami waydo ay Qaramada midoobay iyo dawladaha kale ee ujeedada ay ka leeyihiin wadahadaladani tahay midnimo Soomaaliyeed ay guulaysan doonaan, qadiyadii gooni isutaaga Somalilandna god dheer gelayo oo ay adag tahay in dib looga soo saaro.